कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि नेपालमा जनशक्ति अभाव छ? – Dullu Khabar
२७ बैशाख २०७८, सोमबार १०:५१
काठमाडाैं । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै देशभरका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या जति बढ्यो त्यही अनुपातमा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छन्।
कतिपय अस्पतालले डाक्टरदेखि सरसफाइकर्मीसम्म अभाव भएको भन्दै सरकारसँग व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्।
सरूवा रोग अस्पतालको केन्द्र मानिएको टेकु अस्पतालदेखि आफैं डाक्टर नर्स उत्पादन गर्ने टिचिङ अस्पतालसम्मले आफूहरूकहाँ स्वास्थ्यकर्मी माग गरेका थिए। विभिन्न प्रदेश अस्पतालले पनि स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएको भन्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन्।
टिचिङ अस्पतालले अघिल्लो साता १५० जना नर्स, २०/३० जना डाक्टर, सरफाइ कर्मचारीसहित तीन सय कर्मचारी चाहिएको बताएको थियो।
टेकु अस्पतालले पनि डाक्टर, नर्ससहित ८ जनाको माग गरेको थियो। काठमाडौं उपत्यकामात्र होइन विभिन्न प्रादेशिक अस्पतालले समेत जनशक्ति नभएको भन्दै माग गरिरहेका छन्।
कोरोनाको बेला धमाधम स्वास्थ्यकर्मी मागका कुरा आइरहँदा कोरोनाको उपचारका लागि जनशक्ति अभाव त छैन? भन्नेमा धेरैको चासो छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने जनशक्तिको अभाव नभएको बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जनशक्ति अभाव अहिले नभएको दाबी गरे।
‘सरकारी अस्पतालले जति जनशक्ति माग गर्नुभएको छ, त्यसका लागि हामीले सम्बन्धित अस्पताललाई स्वीकृति दिइसकेका छौं। अब मन्त्रालयले नै कर्मचारी नियुक्त गरेर पठाउने कुरा सम्भव छैन। उहाँहरूले चाहिने जनशक्तिका लागि आवश्यक रकम हामीले पठाइदिने हो, जो पठाइदिन्छौं भनेकै छौं। उहाँहरू आफैंले स्वास्थ्यकर्मी राख्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।
उनले अहिले नै बजारमा जनशक्ति अभाव छ भन्ने कुरा तथ्यपूर्ण नभएको बताए।
अरू अस्पताल र डाक्टरहरूसमेत अहिलेसम्मको अवस्थामा जनशक्ति अभाव नभएको बताउँछन्।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन दिव्यासिंह साहले पनि अहिले जनशक्ति भएन भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको बताइन्।
‘बाहिरबाट सोचेजस्तो छैन। हामीसँग अहिले जनशक्ति छँदै छ। खाली त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘टिचिङमै पनि अहिले सरूवा रोग, मेडिसिन र निमोनिया हेर्ने डाक्टरलाई मात्र यसमा खटाइएको छ। भोलि अभाव हुँदै गए अरू विषयमा विशेषज्ञता भएका डाक्टरलाई पनि खटाउनुपर्छ। त्यसबाहेक पनि हामीसँग एमडीका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थी छन्।’
उनले टिचिङमात्र होइन अरू अस्पतालमा पनि कोरोना उपचारका लागि जनशक्तिको अभाव हुनु नपर्ने बताइन्।
टिचिङ अस्पतालले केही समय अघि माग गरेका १५० नर्समध्ये ३५ जना भर्ना गरिसकेको छ।
अस्पतालका निर्देशक दिनेश शर्माले अहिलेसम्म ३५ जना नर्सहरू नियुक्ति गरेर ओरिएन्टेसन दिएर काममा पठाइसकेको अनि डाक्टरहरू पनि व्यवस्थापन गरिसकेको बताए। सरसफाइ कर्मचारी भने कोरोनाका कारण डराउने गरेको उनको बताए।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले तिमीहरू चाहिएको कर्मचारी नियुक्ति गर हामी तलब सुविधा के चाहिन्छ दिन्छौं भनेको छ। त्यसपछि हामीले डक्टरहरू यहीँ भित्रबाट मिलाइसकेका छौं। नर्सहरू त ३५ जना नियुक्ति नै गर्‍यौं अब चाहिने जति नियुक्ति गर्दै जान्छौं,’ उनले भने, ‘सबभन्दा गाह्रो सरसफाइ कर्मचारीको भर्ना गर्न भइरहेको छ। कति त केही दिन काम गरेपछि डराएर आउनै छोडेका छन्। त्यसबाहेक अहिललाई समस्या त छैन।’
छुट्टै कोरोना अस्पताल चलाएको टिचिङ अस्पतालले त्यसकै लागि छुट्टै जनशक्ति माग गरेको हो। अहिलेसम्म उसले २५० बेड सञ्चालनमा ल्याएको छ।
‘हामीसँग दुईसय पचास बेड छ। यसलाई बढाएर पाँच सय बेडसम्म धान्न सक्छौं भन्ने छ, त्यति बिरामीसम्म यही जनशक्तिले धान्ला,’ शर्माले भने, ‘त्योभन्दा पनि बढी संक्रमित आउन थालेपछि त पुरै अस्पताललाई नै कोभिड अस्पताल बनाएमात्रै हो।’
टेकु अस्पतालमा भने ८ जनाको माग गर्दा सयजनाले आवेदन दिएकाले अहिले छनोटको प्रक्रिया भइरहेको छ।
टेकु अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सागर राजभण्डारीले जनशक्तिले नपुगेर माग गरेकोमा सोचेभन्दा बढीले नै आवेदन दिएको बताए।
‘सोचेभन्दा धेरै आवेदन आयो। उनीहरूमध्येबाट छान्नुपर्‍यो त्यसका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुर्‍याउन पर्‍यो। यस्तो समयमा अतिरिक्त कामको भारजस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेम्म त जनशक्तिको अभाव खास छैन। हामीले मागेभन्दा पनि धेरैले आवेदन दिएकैबाट त्यो समस्या कम्तीमा निकट भविष्यसम्म छैन भन्ने बुझिन्छ।’
पाटन अस्पतालका निर्देशक रवि शाक्यले पनि अहिलेसम्म जनशक्ति अभाव नभएको बताएका छन्।
‘हामीकहाँ अहिले कोरोनाको उपचारका लागि जनशक्ति अभाव छैन। मेडिकल कलेज पनि भएकाले जनशक्तिको हामीले पीर गरेका छैनौं,’ उनले भने।
अहिलेकै जनशक्ति र अन्य क्षमताले ६५० बेडसम्म कोरोनाका बिरामी धान्न सकिने उनले बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन बुटवल र धनगढीमा पनि जनशक्तिको अभाव अहिले छैन।
वैशाख १९ गतेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई एक सय ८१, राप्ती प्रादेशिक कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीलाई एक सय ७१, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जलाई एक सय ५२ र भीम अस्पताल भैरहवामा ७१ गरी पाँच सय ८३ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले अहिले सञ्चालन भइरहेको कोरोना अस्पतालमा जनशक्ति खासै अभाव नभएको बताए।
उनका अनुसार यही हप्ताभित्र २५ बेडको एचडियू थप गर्न लागिएको र कोरोनाको अर्को लहर पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी ३५ बेडको कोरोना आइसियू र ५० बेडको एचडियू थप गर्ने योजनामा रहेकाले २०० कर्मचारी थप चाहिने छ। जनशक्तिको सुनिश्चितताको लागि उक्त अस्पतालले प्रदेश सरकारलाई प्रस्ताव पठाउँदै छ। सरकारले स्वीकृति दिए जनशक्ति पूर्ति गर्न सकिनेमा उनी ढुक्क छन्।
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा अहिले ४ सय २५ जना कर्मचारी काम गर्छन्।
कोरोना महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै बीचमा अस्पतालाले थप कर्मचारी भर्ना गरेपछि अहिले कर्मचारीको संख्या बढेर ४ सय २५ भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दीलिपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनले अहिले अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चापअनुसार जनशक्ति अभाव हुने समस्या भएकोले अझै थप कर्मचारी भर्ना गर्ने बताए।
‘रिटायर्ड कर्मचारी र विदामा बसेकालाई पनि सेवामा फर्किन आग्रह गरेका छौं, थप कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ,’ उनले भने, ‘पोहोर कोरोनाको त्रासले आवेदन दिनेहरू कम आउँथे। यस वर्ष भने आवेदन दिनेहरू बढेका छन्। जागिर पाइने भएपछि आवेदन दैनिक पर्ने गरेको छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार नेपालमा लाइसेन्सप्राप्त डाक्टरको संख्या झन्डै १८ देखि २० हजारसम्म र स्टाफ नर्स नै करिब १ लाखको हाराहारीमा छन्। आवश्यकता परेको बेला यिनै जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्छ।
‘जनशक्ति अभाव छैन। सबै ढुक्क भए हुन्छ,’ उनले भने।
आइओएमका पूर्वडिन जेपी अग्रवालले पनि व्यवस्थापन गर्ने हो भने जनशक्ति अभाव नहुने बताए।
‘अहिले नै काम गरिरहेका डक्टर नर्स छन्। तिनीहरूलाई कोरोना उपचारमा व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्न सकिन्छ। भोलि आवश्यक पर्‍यो भने अरू विषयका डाक्टरलाई पनि कोरोनाकै उपचारमा लाग भन्ने हो,’ उनले भने, ‘भोलि आवश्यक परे रिटार्यड डाक्टर, निजी क्षेत्रका डाक्टर र डाक्टरी पढ्दै गरेकालाई समेत उपचारमा खटाउन सकिन्छ।’
प्रविधिको जमानामा अनलाइनमार्फत् पनि डक्टरहरूले भिडिओमा टाढाटाढाका बिरामी हेरेर जुनियर डाक्टर नर्सलाई सघाउन सक्ने उनले बताए।
‘काठमाडौं बसेर धनगढीको आइसोलेसनमा डाक्टरले मनिटर गर्न सक्ने जमाना आइसक्यो त्यसैले यो सबै व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने अहिलेकै जनशक्तिले हाँसीहाँसी कोरोना उपचार गर्न सकिन्छ,’ पूर्वडिन अग्रवालले बताए।